Mariin ‘‘IGAD’’ miilanaa jeequmsa Sudaan Kibbaatiif furmaata argamsiisaa laata?
Sudaan kibbaa ALA bara 2011 Sudanirraa addaan cituun mootummaa ofii hundeeffatte. Ta’us ummatni biyyattii osoo firii injifannoo hin dhandhamatiin waggaa lama booda bara 2013tti waldhabbiin siyaasaa pirezidaantii biyyattii, Saalvaa Kiiriifi Ittaanaasaanii, Riyaak Maachaar gidduutti mudate.
Waldhabbii kana ibiddi jeequmsaa qabate ummata biyyattii miliyoona 12 ta’u godaansaaf saaxilee ummatni kumaatamaan lakkaa’amu ammoo lubbuu dhabsiiseera. Biyyi kuusaa boba’aatiin badhaatuu taate faayidaa dinagdeef oolfachuu dadhabdee meeshaa waraanaa bituun ittiin of gubaa jirti.
Waraanaan walqabatee dhibewwan daddarboo, ongeefi qaala’iinsa jireenyaa hamaaf saaxilamteetti. Ummatni biyyattii dhukkuba koleeraafi dhukkuboota faalama bishaaniitiin dhufaniin dararamaa jira. Meeshaa waraanaa dachee biyyattii hundarraa ibidda tufuurraa kan ka’e gargaarsa namoomaa dhiyeessuun daran rakkisaa akka ta’es miidiyaaleen addunyaa gabaasaa turaniiru.
Jeequmsa kana dhaabsisuuf biyyoota guddatanis ta’e guddinarra jiranirraa yaaliin taasifamaa turus rakkoon biyyattii akkuma jirutti itti fufeera. Ceephoo guddaan xiinxaltoota siyaasaa biraa ka’us dhaabbileen addunyaa kutannoon hojjechuu dhabuusaaniiti malee rakkoo biyya kanaa daran wal xaxaa ta’ee miti.
Walta’iinsi Misooma Motummoota Afrikaa Bahaa, “IGAD” nageenya biyyatti mirkaneessuuf yaalii ijibbaachisaa eegaleera. Dura taa’aan mana maree IGADfi Ministirri Dhimma Alaa Mootummaa RFDI, Doktar Warqinaa Gabayyoo akka jedhanitti, waliigalteen nageenyaa ALA bara 2015 mootota Sudaan Kibbaa gidduutti mallattaa’e hojiitti hiikamuu dhabuusaatiin biyyattiitti gaaga’amni guddaan dhaqqabeera.
Haaluma kanaan ummatni miliyoonaan lakkaa’amu beelaafi ongee hamaaf saaxilameera. Kanaafuu, rakkoo nageenya biyyattii hundeerraa furuuf ifaaja taasifamaa jiru milkeessuuf aanga’oonni biyyattii kutannoon hirmaachuun barbaachisaadha. Qaamota marii nageenyaa kana gufachiisuuf carraaqanis seeraaf dhiyeessuuf ni hojjetama.
Doktar Warqinaan kana haa jedhan malee wayita mariin kun adeemsifamaa jiruttuu, lolli hammaatee akka jiru ‘Sudan Tribune’ gabaasaa jira.
Akka gabaasichaatti dhukaasa Sanbata darbe biyyattii gara kaabaatti eegaleen yoo xiqqaate lubbuun namoota 30 wayita darbu, ummatni kumaatamaan lakkaa’amu qe’eesaa dhiise baqachuuf dirqameera.
Namootni 30n du’an kunneenis miseensa maatii namootni of biraa dhabaniin kan tilmaamame malee lubbuun namoota du’an lakkoofsa kanaa ol ta’a. Kunis walwaraansi eegalame kun hamaa ta’uusaatiin namoota du’an achi seenanii addaan baafachuun waan hin danda’amneefi.
“BBC”n gabaasasaa Kibxata darbeetiin akka ibsetti ammoo lola kanaan walqabatee namootni gargaarsa namoomaa dhiyeessan ja’a eessa buuteensaanii dhabameera. Erga lolli kun ALA bara 2013 eegalee as namootni gargaarsa namoomaa dhiyeessuurratti bobba’an 96 du’uufi 28 ammoo mana sirreessaa keesssatti ugguramuusaanii yaadachiiseera. Wayita mariin nagaa eegalame kanatti walwaraanni hamaan bifa haaraan eegalame tarii maricha gufachiisinnaa jedhamee sodaatameera.
Walumaa galatti, IGAD nageenya Sudaan Kibbaa mirkaneessuuf kutannoodhaan hojii eegalus walwaraanni biyyattii keessatti finiinee jira. Haala jedhameen aanga’oonni biyyattii walitti araaramuun rakkoon biyyattii furmaata waaraa argataa laata?
Torban kana/This_Week 43540
Guyyaa mara/All_Days 1468320